Nadiifiye uumi - Nidaamka Baradhada
Waxaan fahansanahay waxyaabaha gaarka ah ee tikniyoolajiyadda nadiifinta uumiga ee miraha iyo khudradda si wadajir ah shirkadda TOMRA Cunnadu waa mid ka mid ah soosaarayaasha ugu waaweyn adduunka ee tiknoolajiyada iyo xalka kala-soocidda iyo nadiifinta cuntada.
Joogitaanka khudaarta faaruqsan ee faaruqsan ee la warshadeeyay ee saaran khaanadaha waaweyn ee Ruushka ayaa muddo dheer joojiyay inay ka yaabiso macaamiisha. Ma aha in la xuso waxyaabaha diirran oo la jarjaray oo la jarjaray alaabooyin semi-dhammeeyay. Waxaa intaa dheer, tirooyinka ayaa muujinaya in baahida loo qabo alaabooyinka noocaas ahi ay si isdaba joog ah u korayaan. Si kastaba ha noqotee, wax la yaab leh ma leh. Xaaladda oo waqtiga uu noqday kheyraadka ugu qiimaha badan, qaar badan uma arkaan wax dhibaato ah bixinta wax yar oo dheeraad ah oo ku habboon.
Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa suuqa cuntada. Runtii, in badan oo ka mid ah shirkadaha wax-u-qabashada dadweynaha ayaa durbaba doorbidaya khudradda diirran iyo miraha ay iibsanayaan. Faa’iidooyinka ayaa sidoo kale cad. Tani waa, ugu horreyntii, badbaadin muhiim ah oo waqti hore lagu lumi lahaa nadiifinta iyo dhaqidda alaabta ceyriinka ah ee soo galaya. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay heshaa miraha iyo khudradda, sida ay yiraahdaan, miisaanka saafiga ah, taas oo ah, diirka oo aan lahayn, iyo sidoo kale dammaanad qaadka iyada oo aan la helin meelo burbursan iyo miraha oo dhan ama digriiga, taas oo hadhow loo baahan yahay in la gooyo ama la tuuro gebi ahaanba. Guud ahaan, u wareejinta alaabooyinka la sifeeyay waxay xaqiijin karaan waxtarka weyn ee shirkadda wax soo saarka, taas oo qiimo weyn ugu fadhida suuq aad u tartan badan.
Nadiifinta uumiga TOMRA Cuntada: nadiifi, ha karin
Shirkad TOMRA Cunnadu waxay soosaaraysay tikniyoolajiyada iyo qalabka waxsoosaarka kala soocida iyo nadiifinta alaabada cuntada in kabadan 40 sano. Waad ku mahadsan tahay waayo-aragnimada urursan ee mashiinka TOMRA Uumiga cuntada ayaa diirta khudradda iyo miraha si dhakhso ah oo ka waxtar badan xal kasta oo u dhigma oo suuqa yaal. Isla mar ahaantaana, diiradda ugu weyn ee soo saarista qalabka cusub ayaa si aan kala sooc lahayn loo saaray kor u qaadista tayada nadaafadda iyo yaraynta qashinka cuntada. Xaqiiq madadaalo: Maanta, 85% shiilaha adduunka waxaa lagu soo saaraa iyadoo la isticmaalayo nadiifiyeyaasha uumiga. TOMRA Cuntada.
Mabda 'ahaan, shirkaddu waxay si gaar ah ugu isticmaashaa tikniyoolajiyadda nadiifinta uumiga mashiinnadeeda, maadaama kaliya habkani awood u leeyahay inuu ku bixiyo, dhinaca kale, tayada nadaafadda sare, iyo dhinaca kale, xaddiga ugu yar ee qashinka cuntada. Si kastaba ha noqotee, kan dambe ayaa run ah oo keliya xaaladaha qaarkood. Xaqiiqdu waxay tahay, dhab ahaan, mugga qashinka cuntada inta lagu jiro nadiifinta uumiga si toos ah waxay kuxirantahay xaddiga uumiga uumiga ka soo baxa diirka. Sidaa darteed, cadaadiska uumiga ayaa door muhiim ah ka ciyaara howshan - kolba inta ay sarreyso, waqtiga yari waxaa lagu qaataa soo saarista sheyga, iyo qoto dheerida uumiga ee uusku kuuskuusho hoosta diirka. Marka, luminta badeecad qiimo leh oo ku habboon in la isticmaalo ayaa la dhimay. Cadaadiska uumiga ee mashiinada nadiifinta uumiga ugu horumarsan TOMRA Cunnadu waxay galeysaa 20 MPa, iyadoo siineysa qoto dheerida uumiga oo kaliya 0,5 mm. Sidaa darteed, xaddiga qashinka cuntada marka la isticmaalayo mashiinnada nadiifinta uumiga laga bilaabo TOMRA Cuntada ayaa lagu qoraa diiwaanka 6-8% - tirada ugu yar suuqa.
Intaa waxaa dheer, dhammaan nidaamka nadiifinta waxaa lagula socdaa waqtiga dhabta ah iyadoo la adeegsanayo dareemayaal gaar ah. Tani waxay ka dhigan tahay, tusaale ahaan, marka mugga qashinka cuntada uu kordho, nidaamku wuxuu u tilmaamayaa wadaha inuu hagaajiyo heerka uumiga iyo heerka socodka badeecada.
Yaa u baahan tan?
Marka la soo koobo, qof kasta oo daneynaya tayada sare ee wax soo saarka la soo saaray, hababka wax soo saarka wax ku oolka ah, qashinka cuntada oo hooseeya iyo faa'iidada ganacsi ee kordhay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira nuance. Sida iska cad, waxaa jira maalgashi muhiim ah oo loogu talagalay in si dhab ah oo hufan loogu nadiifiyo qalabka nadiifinta uumiga wax soo saarka. Sidaa darteed, xalalka noocan oo kale ah waxay si fiican uga shaqeeyaan shirkadaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn: baaxadda alaabta oo ballaadhan, muddada gaaban ee bixinta lacagta qalabka nadiifinta uumiga ayaa ka gaaban.
Tusaale ahaan, waxqabadka mid ka mid ah mashiinnada nadiifinta uumiga ugu waxtarka badan TOMRA Cuntada - ECO - wuxuu gaari karaa 60 kiilo garaam saacaddii, taas oo ah sawir aad u cajaa'ib leh. Isla mar ahaantaana, isla mashiinka, mahadnaqa isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ee keydinta tamarta, ayaa muujinaya isticmaalka uumiga oo aad u hooseeya - shan jeer ka yar marka loo eego xalka la midka ah ee tartamayaasha.
Si kastaba ha noqotee, khadka hadda jira ee mashiinnada nadiifinta uumiga TOMRA Cunnadu waa mid jajaban oo ku filan si loo abuuro xalka ku habboon xitaa ganacsiga yar yar.
Maxaa ku yaal Ruushka?
Soosaarayaasha cuntada ee Ruushka waxay si firfircoon u xiiseynayaan xalalka ugu habboon ee kala-sooca iyo nadiifinta isla markaana aan si firfircoon uga dhaqangelin iyaga. Asal ahaan, kuwani waa shirkado waawayn oo gaadhay heer wax soo saar haday tahay mug iyo tayo wax soo saar labadaba. Tani, markeeda, waxay sii go'aamisay adeegsiga qalabka yurub, taas oo noo ogolaaneysa inaan damaanad qaadno isku mug iyo tayo, iyo sidoo kale inaan hubino heerka ugu hooseeya ee qashinka cuntada iyo waxtarka ugu badan ee howlaha wax soo saarka.
Sidaas, qalab loogu talagalay nadiifinta uumiga ka TOMRA Cuntada waxaa adeegsada soosaaraha shiilan ee faransiiska ee ugu weyn dalka soo saare iyo soo saaraha khudradda la qaboojiyey - oo wata mashiinno ka socda TOMRA Cuntadu waa diirka baradhada iyo karootada.
Iskusoo wada duuboo, suuqa Ruushka ayaa si isdaba joog ah ugu sii siqaya faafitaanka sii kordhaya ee xoogan iyo hirgelinta tikniyoolajiyada. Xaaladdaan waxaa qeexaya waxyaabaha gaarka ah ee baahida loo qabo - dalabyada macaamiisha ee tayada sare leh iyo alaabada cuntada aaminka ah ayaa ah dalab xalka hufan iyo tiknoolajiyadeed ee kala sooca iyo nadiifinta soo saarayaasha. Sidaa darteed, suuqa maanta, maalgashiga qalabka teknoolojiyada ee nadiifinta uumiga ka TOMRA Cuntada xaq baa loogu leeyahay
Tags: TOMRA Foodfarsamada nadiifinta uumiga
Baradhadu waxay hoos ugu dhacday qiimaheeda dalka Poland